सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ बाँडफाँड, कसरी हेर्ने नतिजा ? – Samriddhakhabar
सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ बाँडफाँड, कसरी हेर्ने नतिजा ?
August 14, 2021 August 14, 2021 खबर समृद्धLeaveaComment on सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ बाँडफाँड, कसरी हेर्ने नतिजा ?
काठमाण्डौ : सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडकाे साधारण सेयर (आईपीओ) को बाँडफाँड सम्पन्न भएको छ । उक्त आईपीओको आज सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं मा बाँडफाँड भएको हो ।
मागभन्दा धेरै आवेदन परेको हुनाले उक्त आईपीओ गोलाप्रथाद्वारा बाँडफाँड भएको छ । ग्रोलाप्रथाबाट वितरण गर्दा ५ लाख ४० हजार जना आवेदकले १० कित्ताका दरले सेयर हात पारेका छन् । गोलाप्रथाद्वारा गरिएको बाँडफाँडमा लक्की नम्बर २ को चिट्ठा परेको छ ।
कम्पनीको आईपीओमा २४ लाख १९ हजार १ सय २७ आवेदकबाट ३ करोड ६९ लाख ४३ हजार ४ सय ४० कित्ता सेयर खरिदका लागि आवेदन परेको थियो । यो मागभन्दा ६.८४ गुणा बढी आवेदन हो । कम्पनीको आईपीओले हालसम्मका सबै रेकर्डहरु ब्रेक गरेकाे थियाे ।
सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले साउन २० गते, बुधबारदेखि साउन २४ गते आईतबारसम्म प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरले ६० करोड रूपैयाँ बराबरको ६० लाख कित्ता आईपीओ बिक्री खुल्ला गरेको हो । जसमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख कित्ता कर्मचारीहरुलाई र ५ प्रतिशत सामूहिक लगानी कोषहरुलाई सुरक्षित गरी बाँकी ५४ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको थियो ।
कसरी हेर्ने रिजल्ट ?
आईपिओ बाँडफाँडको काम सम्पन्न भईसकेको भएपनि डाटा अपलोड गर्न केहि समय लाग्ने भएकाले आईपीओको नतिजा हेर्न भने केहि समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक भएपछि कम्पनीको आईपीओको नतिजा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले सञ्चालनमा ल्याएको https://iporesult.cdsc.com.np नामक वेभसाइटबाट, प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको वेभसाइट https://results.prabhucapital.com/ र मेरो सेयरमा गई आफुले आईपीओमा आवेदन गर्दाको एप्लिकेसन रिपोर्टमा गएर त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ ।
एसईई नतिजा प्रकाशित हेर्नको लागि यहाँ CLICK गर्नुहोस
लोकप्रिय कलाकार शम्भुराज थापाको नि’धन
डिम्याट र मेरो सेयरलाई अनलाइनबाटै यसरी गर्नुहोस् एकै पटकमा वर्षौंसम्मको लागि नवीकरण!
July 3, 2021 खबर समृद्ध
तेह्रथुमको रिजल्ट किन देखाएन ! अब कसरी हेर्ने ?
September 10, 2021 खबर समृद्ध
ब्रोकर कमिसन घटाउने तयारी गर्दै धितोपत्र बोर्ड
July 8, 2021 खबर समृद्ध
भेटियो कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’, जोखिममा नेपालीहरु हेर्नुहोस्।
कक्षा १२ को नतिजा सार्बजनिक यसरी हेर्नुहोस् रिजल्ट।
कक्षा १२ को नतिजा : यसरी हेर्नुहोस् रिजल्ट
खुसीको खबर चिनियाँ वैज्ञानिकले पत्ता लगाए सबै कोरोना भेरियन्ट मार्ने ‘एन्टिबडी’ हेर्नुहोस्।